Wasemagadala - Коса - Суахили Переводы и примеры
Вы искали: wasemagadala (Коса - Суахили)
Baye ke bekhona apho uMariya waseMagadala nomnye uMariya, behleli phantsi malunga nengcwaba.
Afike uMariya waseMagadala, ababikele abafundi ukuba uyibonile iNkosi; yathetha ezi zinto kuye.
ekwakukho phakathi kwabo uMariya waseMagadala, noMariya unina wooYakobi noYose, kwanonina woonyana bakaZebhedi.
Baye ke bengooMariya waseMagadala, noYohana, noMariya kaYakobi, nabanye ababenabo, abazixelayo ezo zinto kubapostile.
Ke kaloku, ngolokuqala usuku lweveki, kuza engcwabeni uMariya waseMagadala kusasa, kusentsundu, alibone ilitye lisusiwe engcwabeni.
Ke kaloku wathi uYesu, evuke ekufeni kusasa ngolokuqala usuku lweveki, wabonakala kuqala kuMariya waseMagadala, awayekhuphe kuye iidemon zasixhenxe.
Yakubon ukuba idlule isabatha, ooMariya waseMagadala, noMariya unina kaYakobi, noSalome, bathenga ubulawu, ukuba beze bamthambise.
Kwaye ke kukho nabafazi, bekhangele bemgama; kubo apho wayenguMariya waseMagadala, noMariya unina wooYakobi omnci nokaYose, kwanoSalome;
j'aime ta bite (Французский>Английский)lynch (Английский>Латышский)ceiling fan (Английский>Тагальский)wife (Английский>Зулусский)higop (Тагальский>Английский)globuline (Французский>Польский)ấy yêu thương người (Вьетнамский>Английский)referral code (Английский>Тамильский)lens (Английский>Греческий)main coaching le raha hu (Хинди>Английский)drown (Английский>Корейский)أطلق (Арабский>Бенгальский)fetcher (Английский>Тагальский)whakakororia (Маори>Русский)conducting (Английский>Венгерский)data type (Английский>Русский)κατανικήσουμε (Греческий>Английский)thai (Итальянский>Мальтийский)petang bersendirian (Малайский>Английский)il faut que je vous parle immédiatement (Французский>Голландский)pinaubaya ko na sa diyos ang lahat (Тагальский>Английский)faba (Датский>Словацкий)meaning navvaru (Телугу>Английский)groothandelsleveringen (Голландский>Финский)dimples in kiswahili (Английский>Суахили)